သက်ဝေ: ကမ္ဘာမြေကို အလည်ရောက်လာသူတယောက်ရဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်
Posted by သက်ဝေ at 9:40 PM
Min April 29, 2013 at 10:15 PM
Yeah we feel so sorry when we heard that news and his crying photos.
တမာတောမြေ April 29, 2013 at 10:29 PM
တခြားလူတွေကိုရောပဲ ပေါ့ ...:'(
အနော်လည်း အဲဒီသတင်းကို ကြားလိုက်ရတုန်းက တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိတယ်။ ကလေးလေးကို ကျောင်းကို အတူပို့အပြီးဈေးအတူထွက်ဝယ်ခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ ၂ဦး။... အသက်မဲ့နေတဲ့ ဇနီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနီးမှာ စူးဝါးစွာမြည်နေတဲ့ဖုန်းမြည်သံတစ်ခု......သူများတွေအပြောအရNTUC ရဲ့ ငွေချေရာနားမှာ သတင်းဆိုးကြောင့် နေရာကတောင်မရွေ့နိုင်တော့အောင် ရပ်တန့်ဆွံ့အသွားတဲ့ ခင်ပွန်းသည် ယောက်ျားတစ်ယောက်။ ......အဲဒါတွေကို တကွက်ချင်းလိုမြင်ယောင်မိလို့...... မမသက်ဝေပြောသလိုပဲ ...((((((ကမ္ဘာမြေကို အလည် တခေါက် ရောက်လာသူတိုင်းဟာ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်ရစမြဲ မဟုတ်လား…။ သို့သော်လည်း အဲဒီလို အိမ်ပြန်ခရီးတွေမှာ အချိန်တန်လို့ ပြန်ရတဲ့ ခရီးမျိုး၊ အေးချမ်းပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့ ခရီးမျိုးသာ ဖြစ်ပါစေ.....)))))
Ma Tint April 30, 2013 at 12:50 AM
အားလုံးဟာဧည့်သည်တွေပဲမို့ အလည်ရောက်လာပြီးရင်တော့ ပြန်ကြရစမြဲပါ။ ဒါပေမယ့် သမရိုးကျ ပြန်လမ်းဖြစ်စေချင်တယ် မသက်ရေ...
Hmoo April 30, 2013 at 2:23 AM
Hmoo April 30, 2013 at 2:34 AM
IS this accident happen near clementi shopping mall?
သက်ဝေ April 30, 2013 at 9:31 AM
Min ၊ တမာတောမြေ ၊ Anonymous ၊ အန်တီတင့် ၊ Hmoo - ကော်မန့်တွေအတွက်ရော စာနာနားလည်မှုတွေ အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Anonymous - ဟုတ်ပါတယ်... ၂၃ ရက်နေ့ မနက်က ဖြစ်ခဲ့တာပါ...
ဇွန်မိုးစက် April 30, 2013 at 10:02 AM
စာဖတ်နေရင်း တစ်ဝက်လောက်မှာ သိလိုက်တယ် အစ်မ။ အဲဒီနေ့က ညီမ MRT ပေါ်အရောက်မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တာ။ ရုံးရောက်တော့ သတင်းတွေက တက်လာလို့ ၀င်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကွယ်လွန်သူနဲ့ ကျန်ရစ်သူအတွက် ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်း၊ ကိုယ်လည်း မီးပွိုင့်ဖြတ်ကူးနေကျနေရာမို့ ထိတ်လန့်သွားရင်းနဲ့ပေါ့။ ကျန်ရစ်သူအမျိုးသား ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးနေတဲ့ပုံလည်း တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်အတူတူ ရောက်လာခဲ့တာ၊ တစ်ခရီးတည်းအတူသွားခဲ့ကြတာ မှန်ပေမယ့် ထွက်ခွာသွားချိန်တွေဟာ မတူညီဘူးဆိုတဲ့ အသိသံဝေဂက အာရုံတံခါးဝကို လာခေါက်သွားခဲ့တယ်။
စာရေးကောင်းတာရော YIT ကျောင်းကဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ရော ပေါ့
comment ရေးလေ့မရှိပေမဲ့ ဒီတခါတော့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ခံစားရလွန်းလို့ ရေးမိပါတယ်
လူတိုင်း သေကွဲရှင်ကွဲနဲ့ကြုံကြရပမဲ့ အေးအးချမ်းချြမ့်းစိတ်ထားတတ်ဖို့က ခက်သားပဲ
ဖဘမှာ အကြမ်းဖျင်းကြားလိုက်ပြီး ကလေးလေး ကျန်ခဲ့တာ ခုမှ သိရတယ်.. စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ..
ညီလင်းသစ် May 3, 2013 at 3:32 AM
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ အစ်မသက်ဝေရယ်....၊း(
အထူးသဖြင့် အသက်မဲ့နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနားမှာ ဖုန်းကလေး မြည်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်ယောင်ကြည့်မိတဲ့အခါ တော်တော့်ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်၊ ကားအက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တဲ့အကြောင်း သူ့မိန်းမကို ပြောဖို့ ဖုန်းဆက်ကာမှ အဲဒီ အက်ဆီးဒင့်မှာ သေဆုံးခဲ့တာ သူ့မိန်းမ ကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတဲ့ အဖြစ်ဟာ ကျန်ရစ်သူ ခင်ပွန်းသည်အတွက် ဘယ်လောက်များ ခြောက်ခြားကြေကွဲဖို့ ကောင်းလိုက်မလဲ..၊
ချစ်သူ၊ ခင်သူတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီးမှ အေးအေးသက်သာ ထွက်သွားရတဲ့ အိမ်အပြန် ခရီးမျိုးပဲ လူတိုင်းကို ရစေချင်ပါတယ်ဗျာ...။
Thwin May 18, 2013 at 10:26 PM
အိမ်ပြန်ချိန်တွေဟာ တစ်ကယ်ပဲ အချိန်တန်လို့ ပြန်ရတဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်မျိုး၊ အပြန်ခရီးမှာလဲ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ အိမ်ပြန်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်....။